လောကဓာတ်ခန်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 13
မြန်မာပြည်မှာလည်း စာတိုက်ပုံးစနစ် မေးလ် POP3သုံးနိုင်ပြီ
မြန်မာပြည်မှာလည်း စာတိုက်ပုံးစနစ် မေးလ် POP3သုံးနိုင်ပြီ လောကဓာတ်ခန်း သာဂိ၊ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၂ စာတိုက်ပုံးစနစ်ကဲ့သို့သော မေးလ်စနစ် post office protocolကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခင်က သုံးစွဲမရပဲဖြစ်နေရာမှ နည်းပညာပိတ်ဆို့မှုအချို့ကို ဖွင့်ပေးလိုက်သဖြင့် ယခုအခါ မြန်မာအင်တာနက် သုံးစွဲသူများ မိုက်ခရိုဆော့ဖ် outlook express ကဲ့သို့သော ဆော့ဖ်ဝဲများကို သုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ မည်သည့်နေ့ရက်က ပိတ်ဆို့မှုများအား ဖွင့်ပေးလိုက်သည်ကို အတိအကျမသိရှိရသေးပေ။ ယခုရက်ပိုင်း အတွင်း အင်တာနက် လွတ်လပ်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် freedom house အဖွဲ့အစီရင်ခံစာထွက်ရှိလာပြီး ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် ယခုကဲ့သို့ သုံးစွဲနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ POP3ဟုနည်းပညာအခေါ်အဝေါ်အရ ခေါ်ဆိုသည့် စနစ်မှာ မိမိ၏ အီးမေးလ် ဆာဗာမှ စာများကို...
Samsung ရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ် Galaxy S3 – ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်း
ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၁၂ Samsung ကုမ္ပဏီက နောက်ဆုံး ထုတ်လုပ် လိုက်တဲ့၊ လက်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်းလို့ ပြောနိုင်မယ့် Galaxy S3 No tags for this post.
TheGeek – မိုးမခ၀ဲစားခြင်း အင်တာနက် အတိုအထွာ
မီးလျံမြေခွေးကို ထားရစ်ခဲ့၊ ခရိုမ်းပေါ်က ဇော်ဂျီ ပြီးတော့ မိုးမခ၀ဲစားခြင်း အင်တာနက် အတိုအထွာ လောကဓာတ်ခန်းသာဂိ၊ ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၂ ၁) ဖိုင်းယားဖောက်စ်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်လိုက်တာ ဇော်ဂျီနဲ့ စာတွေ ဖတ်လို့ မရတော့ဘူး။ ဒါဆိုရင် ဖိုင်းယားဖောက်စ် အဟောင်းကို filehippo.com မှာ သွားရှာပြီး ပြန်တင်ပြီး သုံးလို့ ရတယ်။ ၂) မီးလျံမြေခွေးမှာ မြန်မာစာစစ်စစ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ယူနီကုတ်ဖောင့်တွေကို ဖော်ပြပေးနိုင်တယ်။ မြန်မာသရီးတို့၊ ဧရာဖောင့်တို့ သုံးစွဲ တင်ဆက်သူတွေအတွက် ပြသနာမဟုတ်ပေမယ့် ဇော်ဂျီနဲ့ အဆင်ပြေနေသူတွက်အတွက် google chrome ကို ပြောင်းသုံးစွဲကြဖို့ အကြံပေးပါရစေ။ ၃) Chrome မှာ default font တွေ အစား ဇော်ဂျီဖောင့်တွေအဖြစ် ပြောင်းပြီး...
ဇူလိုင် ၉ မှာ အမေရိကန်က ပီစီ ၃ သိန်း အင်တာနက်ပြတ်တောက်မည်
ဇူလိုင် ၉ မှာ အမေရိကန်က ပီစီ ၃ သိန်း အင်တာနက်ပြတ်တောက်မည် မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃၊ ဇူလိုင် ၈၊ ၂၀၁၂ လာမယ့် တနလာင်္နေ့ ဇူလိုင် ၉ မှာ အမေရိကန်မှာ ရှိတဲ့ ကွန်ပြူတာ ၂သိန်း ၇သောင်းကျော်ဟာ အင်တာနက်ပြတ်တောက်မှု ခံရမယ် ဆိုပါတယ်။ အဲသည် ကွန်ပြူတာတွေဟာ Rove Digital လို့ ခေါ်တဲ့ အင်တာနက်အဖျက်သမား (ဟက်ကာ) တွေရဲ့ Botnet လို့ခေါ်တဲ့ အင်တာနက်ဗိုင်းရပ်စ် ပိုး ဖမ်းစားခံထားရတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည် ဟက်ကာတွေကို အစိုးရက ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတည်းက ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် သူတို့ဖမ်းစားထားတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေက ၃ သိန်းနီးပါး ရှိလို့ အဲသည်ကတည်းက သူတို့တွေရဲ့...
TheGeek – အမေရိကန်အစုိုးရစာကြည့်တိုက်တွေမှာ အီးဘုတ်တွေငှားနေပြီ
လောကဓာတ်ခန်းသာဂိ၊ မေ ၃၁၊ ၂၀၁၂ အင်တာနက်ခေတ်မှာ ခေတ်အစားဆုံးက ခိုးကူးခွေ၊ ခိုးကူး သီချင်း၊ ခိုးကူး ရုပ်သံတွေပြီးရင် အီးဘွတ်လို့ခေါ်တဲ့ လျှပ်စစ်စံနစ်ပေါ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ စာအုပ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အီးဘုတ်၊ ပီဒီအက်ဖ်ဘုတ် ဘယ်လိုခေါ်ခေါ် ကွန်ပြူတာ၊ တမျက်နှာစာ တက်ဘလက်၊ အိုင်ပက်ဒ်၊ အိုင်ဖုံး၊ အင်ဒရိုက်ဖုံး၊ စမတ်ဖုံးတွေမှာ အီးဘုတ်တွေကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး နိုင်ငံတကာက စာဖတ်သူများ ဖတ်ရှုနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Apple, Amazon, Adode စတဲ့ နံမယ်ကြီး ဆော့ဝဲကုမ္မဏီကြီးတွေက အီးဘုတ်ဖတ်စနစ်တွေ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိရုံတင်သာမက အီးဘုတ်များ ရောင်းချခြင်း စနစ်တွေကိုပါ ထုတ်လုပ်လာပါတယ်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူတွေကလည်း စာအုပ်ဗားရှင်းအပြင် အီးဘုတ်ဗားရှင်းကိုပါ သီးခြား ထုတ်လုပ်ရောင်းချပါတယ်။ Amazon နဲ့ Bern & Noble...
အတုအယောင် ကမ္ဘာမှာ ဆင်ခြင်စရာ – Social Media
ဧပြီ ၂၈၊ ၂၀၁၂ငြိမ်းချမ်းအေး“—ကာမမုဆိုးတွေ ဟာ အွန်လိုင်းမှာ သောင်းနဲ့ချီတဲ့ ပမဏနဲ့ အချိန်တိုင်း ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်—“ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဟာ မျက်မှောက်ခေတ်ရဲ့ လူမှုဘဝထဲကို ထဲထဲဝင်ဝင် ဝင်ရောက်လို့လာနေပါတယ်။ သတင်း၊ အချက်၊အလက်တွေ မြန်ဆန်စွာ ဖလှယ်နိုင်မှုဆိုတဲ့ အားသာချက်ကြောင့် သတင်းခေတ် လူသားတွေအတွက် အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွေကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမှုဟာ နေ့စဉ် ဘဝရဲ့ နိစ္စဓူဝ No tags for this post.
The Geek – ဂျီတော့ခ်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် ချက်ပြတင်းများမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တမျိုးပြန့်
ဂျီတော့ခ်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် ချက်ပြတင်းများမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တမျိုးပြန့် လောကဓာတ်ခန်းသာဂိ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၂ လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်ခန့်စပြီး မြန်မာပြည် အင်တာနက်ခန်းတွေကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ စကားပြောသူတွေဆီက အထူးသဖြင့် မောက်စ်နဲ့နှိပ်ချင်စရာ လင့်ခ်ကလေးတွေ ၀င်လာတယ်။ နှိပ်လိုက်တာနဲ့ သင့်ကွန်ပြူတာကို ဗိုင်းရပ်ဝင်သွားပြီပဲ။ သင့်ဂူးဂဲချက်ဘောက်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ချက်ဘောက်ကနေ အဲသည် လင့်ခ်တွေကို သင်လည်း မတင်ရဘဲနဲ့ သူက တဆင့် ဆက်ဖြန့်သွားတော့တယ်။ ဒါကြောင့် ရင်းနှီးသူတွေက “ဟယ် ဒါလေး ရယ်ရတယ်။ သိန်းစိန်ကြီး သနပ်ခါးတွေနဲ့” ဆိုတာမျိုးတွေ ၀င်လာရင် ယောင်ပြီး နှိပ်မကြည့်ကြနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဂူးဂဲချက်ဘောက်မှာ ဖြစ်ရင်တော့ သင့်ဂူးဂဲပတ်စ်ဝဒ်ကို အသစ်ပြောင်းလိုက်ပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ချက်ဘောက်မှာ ဖြစ်တာဆိုရင် ဖေ့စ်ဘွတ်က ပါစင်နယ်အချက်တွေ ထားတဲ့ဆက်တင်တွေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ကြည့်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ကွန်ပျူတာကို...
The Geek - ဂျီတော့ခ်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် ချက်ပြတင်းများမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တမျိုးပြန့်
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သချာင်္) – အချက်​အလက်​လုံ​​လောက်ခြင်းဆိုင်​ရာ ​မေးခွန်းများ (၅)
လောကဓာတ်ခန်း သာဂိ – Office Application in the Cloud (24)
အေးငြိမ်း - AEIS (Admissions Exercise For International Students) အကြောင်း သိကောင်းစရာ
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ (၁၉၇၅ – ၁၉၈ဝ) – အပိုင်း (၇၄) https://t.co/M8WRt3njeB https://t.co/QIQJCc6t2r about6hours ago ReplyRetweetFavorite